China Double paburi conical chinotenderera fekitari uye vagadziri | Yuantuo
Maumbirwo esimbi isina waya tapered mbiri cheni roller: zvinoenderana neyekutyaira modhi, inogona kukamurwa kuita simba roller roller uye isina simba roller roller, zvinoenderana marongero, inogona kukamurwa kuita yakatwasuka irikuendesa roller mutsara, inoteedzera kuendesa roller roller uye kutendeuka chinotenderera mutsetse. Inogona zvakare kuve yakanyatsogadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kuzadzisa zvinodiwa zvemarudzi ese evatengi. Iyo yepakati upamhi hweyakajairika gauge roller ndeye 100-2000mm, nezvimwewo zvimwe specia ...
Maumbirwo esimbi isina waya tapered mbiri cheni roller: zvinoenderana neyekutyaira modhi, inogona kukamurwa kuita simba roller roller uye isina simba roller roller, zvinoenderana marongero, inogona kukamurwa kuita yakatwasuka irikuendesa roller mutsara, inoteedzera kuendesa roller roller uye kutendeuka chinotenderera mutsetse. Inogona zvakare kuve yakanyatsogadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kuzadzisa zvinodiwa zvemarudzi ese evatengi.
Iyo yepakati upamhi hweyakajairika gauge roller ndeye 100-2000mm, nezvimwewo zvimwe zvakasarudzika zvinogona kugamuchirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Iyo yakajairwa kutendeuka nharaunda yekutendeuka roller mutsara inoverengerwa maererano nefomula, uye zvimwe zvakakosha magadzirirwo anogona kutorwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi. Stainless simbi chinotenderera dzakatevedzana:
Inotora kabhoni simbi uye simbi isina simbi seyakatakura pamusoro peiyo roller, uye iko kutakura kutakura kunotora iyo yakasanganiswa chaiyo kubereka kunoumbwa nesimbi yekutsika. Iine zvakanakira kushanduka-shanduka kutenderera, hombe kubereka (imwechete roller inotakura inogona kusvika 20-100kg), kushanda kuri nyore uye kumisikidza, yakaderera michina yekudyara mutengo, nezvimwewo, uye inogona kushandiswa mukugadzira, kupakata uye kutakura maitiro emazhinji maindasitiri uye minda.
1. Roller zvinhu uye pamusoro kurapwa: kabhoni simbi (kwakakurudzira, chrome kuifukidza), Stainless simbi, kabhoni simbi (zvemapuranga / polyurethane, zvemapuranga, akapfapfaidza), etc.i chinotenderera mugodhi urefu, inoshanda kureba humburumbira muviri, mutopota rusvingo ukobvu, etc. yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nemushandisi;
2. Carbon simbi yakasimba mandrel, yebhuruu zinc yakanamirwa pamifananidzo kana chromium yakanamirwa pamifananidzo, nezvimwewo, kana zvese zvisina tsvina simbi zvinhu;
3. Shaft yekumisikidza fomu inogona kusarudzwa: chitubu muchinda mune mhando, yemukati zino shaft mhando, yekunze tambo mhando, yakazara yakazara tenon mhando, kuburikidza shaft yakakamurwa pini gomba mhando
Iyo roller yakagadzirwa nesimbi isina tsvina
Dhayamita: 25, 32, 38, 50, 60, 76
Iyo mandrel inogona kukamurwa kuita simbi isina tsvina kana kabhoni simbi
Unyanzvi zvinodiwa zve sprocket roller:
1. Chinyorwa kusarudzwa kweiri roller pamusoro: kabhoni simbi kwakakurudzira, chrome kuifukidza, simbi isina chinhu, nezvimwewo iyo roller shaft kureba, inoshanda urefu hwesirinda muviri, pombi madziro ukobvu, nezvimwe zvinogona kuve zvinoenderana maererano nezvinodiwa nevatengi;
2. Iyo shaft yakasimba inogadzirwa nekabhoni simbi yakafukidzwa nebhuruu zinc kana simbi dzese dzisina tsvina. Iyo shaft inogona kuiswa nenzira dzinotevera: chitubu yekudhinda mune mhando, yemukati zino shaft mhando, yakazara yakazara flat tenon mhando uye kuburikidza nemubato pini gomba mhando;
3. Mushure mekuungana, roller inogona kutenderera zvinyoro nyoro isina kumisidzana;
4. Simba rinotenderera rinogona kutyairwa necheni vhiri kana mbiri cheni vhiri. Iyo inoenderana cheni vhiri, cheni vhiri, cheni modhi: 06B / 08B / 10B, nezvimwe zvinogona kuenzaniswa.
Zvadaro: Grooved cône chinotenderera